အရပ်ထဲမှာက နုတ်ကျိုးနေတဲ့ ဇလားဗီယား လို့ခေါ်တဲ့ တီလားပီယား ငါးအကြောင်း - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
အရပ်ထဲမှာက နုတ်ကျိုးနေတဲ့ ဇလားဗီယား လို့ခေါ်တဲ့ တီလားပီယား ငါးအကြောင်း
တီလားပီယား သဘာဝအရိုင်းများက ရေမှော် ရေညှိ အပင်ငယ်များကိုသာ
စားသုံးကြပြီး မွေးမြူရေးတီလားပီယားကတော့ လူလုပ်အစာများကိုသာ စားကြရပါတယ် ။
ဒါကြောင့် မွေးမြူရေးတီလားပီယား ငါးများမှာ သဘာဝအရိုင်း တီလားပီယား
များလို ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ ငါးအဆီ မပါရှိတော့ပါဘူး ။
.မွေးမြူရေးတီလားပီယား ငါးများဟာ ကျန်းမာရေး ကို ဘယ်လို
( Why farmabred Tilapia is Bad for Your Health )
1. ရောင်ရမ်းစေခြင်း ( Inflammation )
မွေးမြူရေးတီလားပီယားငါးကို စားသုံးခြင်းဖြင့် ရှိရင်းစွဲရောဂါများကို
ပိုဆိုးစေပါတယ် ။ ဥပမာ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ ၊ နှလုံးရောဂါ ၊ အဆစ်အမြစ်
ရောင်ရောဂါ များ ပိုဆိုးလာပါတယ် ။
မွေးမြူရေးတီလားပီယားငါးမှာ Omega3fatty acid မပါတော့လို့
2. ကင်ဆာဖြစ်စေသောဓါတ်များ ( Cancer Causing Pollutants )
မွေးမြူရေးတီလားပီယားများကို ကြက် ၀က် ဘဲ တို့ ၏ အညစ်အကြေး
များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အစာများ ကြွေးကြပါတယ် ။
တီလားပီယား သဘာဝငါးအရိုင်းထက် မွေးမြူရေးတီလားပီယားငါးမှာ
ကင်ဆာဖြစ်စေသည့် ဓါတ် ၁၀ ဆ ပိုမိုပါဝင်နေပါတယ် ။
3.ပိုးသတ်ဆေး / ပဋိဇိဝဆေးများ ( Higher Pesticides and Antibiotics )
မွေးမြူရေးငါးများဟာ တနေရာတည်းမှာ အကောင်ရေများစွာ ပြွတ်သိပ်
နေရသည့်အတွက် ရောဂါဖြစ်လွယ် သေလွယ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့်
ရောဂါမဖြစ်ပွားအောင် ပဋိဇီဝဆေး ( Antibiotics ) များ ထည့်
ငါးများမှာ သန်းမစွဲအောင် ပိုးသတ်ဆေး ( Pesticides ) များလည်း
၎င်းဓါတ်များက စားသုံးသူကို အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပါတယ် ။
4. အိုမီဂါ ၃ နည်းခြင်း ( Low Omega-3 to Omega-6 Ratios )
မွေးမြူရေးတီလားပီယားငါးများဟာ ၀နေတဲ့အတွက် အကောင်ကြီးပါတယ် ။
ပရိုတိန်းပါဝင်မှု နည်းပါတယ် ။ အိုမီဂါ ၃ ( Omega-3 fatty acid ) ပါဝင်မှု
နည်းပါးပြီး ( Omega-6 fatty acids ) အချိုးအစား များစွာပါဝင်ပါတယ် ။
Omega-6 fatty acids က များများစားမိရင် ရောင်းရမ်းမှုတွေဖြစ်စေပါတယ် ။
5. ဒိုင်အောက်စင်များခြင်း ( High Dioxin Levels )
ဒိုင်အောက်စင်ဓါတ်ဟာ ကင်ဆာဖြစ်စေပါတယ် ။
ကိုယ်ထဲကို တခါဝင်မိရင် ဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့ ၇ နှစ်ကနေ ၁၁ နှစ်ထိ
သဘာဝငါးထက် မွေးမြူရေတီလားပီယားမှာ ဒိုင်အောင်စင် ၁၁ ဆ ပို
ငါးမွေးမြူရေးလုပ်များအနက် တရုတ်ပြည်က ငါးမွေးမြူရေး
လုပ်ငန်းတွေမှာ စီးလွတ်ဝါးလွတ် လုပ်ကိုင်မှုကြောင့် ၊ အဲဒီက
တီလားပီးယားငါးတွေက ပိုဆိုးတယ်လို့ လေ့လာမှုများက ဖေါ်ပြ
မြန်မာပြည်အကြောင်းတော့ မပါပါဘူး ။
မြန်မာပြည်မှာလည်း မဆလ ခေတ်ကစပြီး တီလားပီယားမွေးမြူရေး
အကြီးအကျယ် စတင်ခဲ့ပါတယ် ။
စားသုံးမှု လည်း အရှိန်အဟုန်ကြီးခဲ့ပါတယ် ။
ယခုကာလမှာ စားသုံးမှုက အရှိန်ရနေပါပြီ ။
စည်းလွတ်ဝါးလွတ် လုပ်တဲ့နေရာမှာ မြန်မာလည်း တရုတ်အောက်
လျော့မယ် မဟုတ်လို့ ၊ ကျနော်တို့ ဆီက တီလားပီယားတွေလည်း
တရုတ်က တီလာပီယားတွေနဲ့ နင်လား ငါလားနေမှာပါ ။
အစားအသောက်အန္တရာယ်တွေက ရှာဖွေလေလေ တွေ့ ရှိလေလေ ဆိုတော့ ။